Ibsa Gabaabaa Global Oromo Advocacy Group (GOAG) Irraa Kenname – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooIbsa Gabaabaa Global Oromo Advocacy Group (GOAG) Irraa Kenname
Ibsa Gabaabaa Global Oromo Advocacy Group (GOAG) Irraa Kenname
Shira Mootummaa Itoophiyaan Qabsoo Oromoo, Jaarmiyaalee ABO fi KFO Irratti Karoorfame Uummanni Oromoo Dammaquun Qabsoo fi Jaarmiyaalee Isaaf Wabii Dhabbachuun Dirqama Oromummaati!
Hagayya 05, 2020 | GOAG
Yeroo ammaa kanatti Oromiyaa dirree jeequmsaa taasisuuf adeemsa qabsoo bilisummaa Oromoo dhiigaf lafee Gootota Oromootiin utubamee qarmammeettii Bilisummaa irra gahe fashalsiisuuf, mootummaa Itoophiyaa shira xaxaa jiruu fi gaaga’amni lubbuu akkasumas qabeenya ummata Oromoo irra gahaa jiru daangaa dhabee jira.
Wareegamuu artist Hacaaluu Hundeessaatiin walqabatee mootummaan loltoota sirna faashistummaatin guutaman goleelee Oromiyaa guutuu keessatti bobbaasudhaan maqaa ABO tiin uummata Oromoo dararuu, hidhuu fi ajjeessuu akkasumas reebichaan qaama miidhuu, qabeenya saamuu fi mancaasuu hojii idilee godhatee jira. Yeroo ammaa Oromiyaa nagaa fi tasgabbiin hin jiru. Qe’een tokkoon tokkoon Oromoo sodaan liqimfameera. Ilmaan Oromoo nagaan manaa bahanii manattii deebi’uun yaaddoo ta’eera. Humni mootummaa Abiy Ahmediin leenjifamee Oromiyaatti bobbaafame gochaa suukaneessaa fi gara-jabummaan uummata Orommo irraan gahaa jira. Humni kun waayee seeraa fi heera kabachiiisuu moggaatti dhiisee qawween ajjeesuu fi mirga naummaa sarbee dararuu seera godhateera. Haati Oromoo shamarran Oromoo gidiraa hamtuu argaa jiru. Gudeeddii fi reebichi, tuffii fi arrabsoon hojii idilee waraanni mootummaa gabroomfataa kuni itti jiruu dha. Gochaan kun haalan yaaddessaa ta’uu isaa nuti akka GOAG-ti irra deddeebinee karaa sabaa-himaalee adda addaa ibsaa turre. Haala amma jiru kanatti jaarmiyaan ABO fi KFO rakkoo haalaan cimaa keessa seenanii jiraachuun agarsiiftuuwwaan armaan gadii sirriitti kan muldhisanii dha.
Manni jireenyaa HD ABO Obbo Daawud Ibsaa humna waraana fi tikaa mootummaan marfamee jiraachuu fi akka mana keessaa hin baaneef uggurri irratti godhamuun yaaddoo guddaa uumera. Toorri bilbila Obbo Daawud Ibsaa mootummaan erga irraa kutamee bubbuleera. Uggurriin manaa fi toora bilbilaa irraa kutuun nageenya fi fayyaa isaaniif yaaddoo nutti tahee jira. Waajjira galees jiruu isaa idilee hojjechuu mootumman dhorkamee jira. Kuni hunduu kan ta’aa jiru hojii isaa mirga uummata Oromo kabachiisuuf hojjetu sirnaan akka hin hojjennee fi ABO dadhabsiisuuf akka tahee Oromoo martii hubachuun hojii mootummaa kanaaf deebii ga’aa tahe kennuun uummata Oromoo, keessattuu Qeerroo fi Qarree, irraa eegama.
Tikni mootummaa waajjira ABO guddicha Gullallee, Finfinne jiru deddeebi’anii seeraa ala seenaa fi bahaa jiraachuun, ajaja mana murtii osoo hin qabaatiin waajjira ABO sakattaana jechuun hojjettoota waajjira kanaa irratti hookkora kakaasaa jirachuun mirkanaa’ee jira.
Hunduu akka quba qabu walgahiin hatattamaa maqaa Gumii sabaa ABO jedhuun Adoolessa 26-27/2020 gaggefamuun ni yaadatama. Walgahiin kunis akka odefannoon keenya mirkaneessutti seera dhaabichaatiin ala akka tahee fi shira kana duuba ammoo motummaan jirachuu isaa ragaaleen hedduun ni mirkaneessu. Mootumman dhimma dhaabolee siyaasaa keessa seenee borcuuf yaaluun dogoggora qofa osoo hin taane yakkaa fi shira karaa dhababilee kaneen ittiin dadhabsiisu akka tahe uummanni keenya hubachuu qaba. Hogganoota ABO giddutti shira xaxuudhan, waldhibdee fi shakkiin isaan jidduutti waan uumame fakkeessanii tarkaanfii adda addaa irratti fudhachuuf mootumman akka karoorfataa jirus hubatamee jira.
Miseensotiin ABO, hogganootni, akkasumas deeggartonni, walumaa galatti sabni Oromoo, nagaa isaanii mootummaan Itoophiyaa Abiyyi Ahmediin durfamu waan jalaa booressaa jiruuf bahanii galuu fi hojii idilellee hojjetanii jiraachuu hin dandeenye.
Waajjirootiin ABO fi KFO Oromiyaa keessa jiran bakkoota baay’etti caccabanii, qabeenyi jaarmiyaalee kunneeniis saamamuu, mancaafamuu fi qondaalonni Konyaalee akkasumas Onoota hedduu keessatti sochii akka hin gooneef manneen hidhaatti guuramuun itti fufee jira.
Tarkaanfii abbaa Irrummaa mootummaan Abiyin gaggeeffamu Waggoota lamaan darban fudhachaa ture daran ajjeefamuu weellisaa Hacaaluutiin booddee hooggantoonni KFO fI ABO, qondaalonnii fi miseensonni gameeyyiin akkasumas deeggartoonni jaarmiyaalee kanneenii manneen hidhaatti guuramaa jiraachuu, akkasumas miidiyaalee Oromoo kan akka OMN fi ONN biyya keessaa cufuun gaazexeessitootas hidhuun sagalee Oromoo ugguree Oromoo gabrummaa hamtuu jalatti cabsuuf karooraa yeroo dheeraa bafachaa turan Nafxanyoonni haala mijataa arganne jechuun hojii suukaneessaa guutuu Oromiyaa keessatti raawwachaa jiraachuu ragaleen ifa jiru.
Mootummaan qabsoo Oromoo farreen sirna dimookirasii tahan jala galchuudhaaf miseensota ABO fi KFO tokko tokko dantaa adda addaatiin goyyomsuu itti fayyadamuuf daba hammana hin jedhamne dalagaa jiraachuu isaaf ragaalee hedduun jiru.
Deeggartootaa fi abbootii qabeenyaa Oromoo ta’an maqaa ABO deggertan jedhuun mootummaan shiraan qabeenya isaanii saamuu, saamsiisuu fi kaan isaanii immoo sodaachisoo, hidhaa fi dhiibbaa guddaa irraan gahaa jira.
Caasaa mootummaa fi humna poolisii, akkasumas humna waraanaa keessaa Oromoota quuqqama sabaa qabaniin isin miseensota ABO ti jechuun shiraan mana hidhaatti guuraa jiru, kaan ammoo hojii irraa arihatamaa jiru.
Walumaa galatti qabsoon bilisummaa Oromoo guyyaa irraa guyyaatti shira mootummaan Abiy Ahmed xaxuun keessaa fi alaatiin miidhamaa jira. Mootummaan qabsoo Oromoo kana cabsuun uummata Oromoo bituuf waan karoorfateef isa kana galmaan ga’uuf shira adda addaa xaxaa jiraachuun isaa eenyuma jalaa iyyuu dhokataa miti. Haala kanas uummanni keenya hubatee dantaa Oromoo fi Oromummaa tiksuu fi tokkummaa qabsaawotaa Oromoo eeggachuu irratti akka fuulleffatu GOAG’n ilmaan Oromoo hundaaf waamicha godha. Kanneen hiree Oromoo duubatti deebisuuf eenyummaa Oromoo cabsitanii sirna gabroonfataa Oromiyaaf Oromoo irratti diriirsuuf halkanii fi guyyaa hojii sab-gantumma bakkaan gahachuuf dhamaataniif gochaa seenan dhiifama isiniif hin goone kana irraa deebitanii qabsoo bilisummaa uummata keessanii cinaa akka dhaabattaniif waamicha lammummaa isiniif goona.
Oromiyaa fi Oromoo badii irraa baraaruun dirqama Oromummaa, finna Oromoo biyya alaa fi keessaa jirtan tahuu hubachuun wareegama barbaachisu baasudhaan shira hamaa mootummaan Itoophiyaa uummata kenyaa fi qabsoo bilisummaa keenyaa irratti xaxu kana dura dhaabbachuun akka fashaleessitan GOAG dhaamsa sabummaa isiniif dhaama; egereen Oromoo harka keenya keessa malee harka diinaa keessa akka hin jirres barree nageenya Oromoo fi Oromiyaatiif waardiyyaa akka dhaabbannus waamicha isinii goona.
Uummanni keenyaa bakka jirtan hundatti garaa garummaa tokko malee harka walqabachudhaan gochaa yakkamaa mootummaan Itoophiyaa uummata irratti dalagu saaxiluu fi karaa dandeenyu hundaan sagalee saba keenyaa taanee akka fashaleessinuuf GOAG waamicha Oromummaa isiniif godha.
Dhuma irratti, qabsoo bilisummaa Oromoo baraaruun filannoo osoo hin taane Oromoof dirqama dhalootaa tahuu namuu beekuu qaba. Kana ta’uu baannaan garbummaa yoom illee keessaa hin baanetti sabni keenya kufuuf deema. Sabaa fi sablammoonni Oromiyaa dangessitan rakkoo walfakkataa keessa waan jirruuf Oromo waliin dhabbachuun qabsoo sirna garbumma kana waliin xumura akka itti goonuuf dirmannaan keessan barbachiisaa dha. Kanaaf GOAG’n waamicha dirmannaa qabsoo isniif godha.
Nagaa, bilisummaa fi haqni hundaaf!
Global Oromo Advocacy Group (GOAG)
Hagayya 4, 2020